shekoyinka galmada ka hadla oo gabdhaha ku biya baxaan | Gaaloos.com
Home » galmada » shekoyinka galmada ka hadla oo gabdhaha ku biya baxaan
Buug ardayda Shiinayska ah lagu baro waxyaabaha galmada ku tacaluqa oo dhan ayay dad daban ka soo horjeedsadeen iyaga oo isticmaalaya barta bulshada Shiinaha ee Weibo. Buuggaas ayaa riqiis ku tilmaamay gabdhaha galmo sameeya guurka ka hor. Buugga oo arrintaas sii faahfaahinaya ayaa sheegay in guurka galmada ka horreeya uu gabdhaha u keeno “dhibaato badan oo dhanka maskaxda iyo jidhkaba leh”.
Buugaas ayaa wax laga baraa ardayda dugsiga sare dhigata. Waxaa markii u horaysay la daabacay buugaas 2004, laakiin waxaa la isla dhexmaray markii uu macallin soo galiyay barta bulshada ee Weibo qaybo ka mid ah cashiradiisa. Dadka Shiinayska ah ayaa bilaabay in ay isla wadagaan iyaga oo ku sheegay labo wajiilenimo.
Buugan ardayda ee ay daabacday 21st Century Publishing Group ayaa intaas ku sii daray in “gabdhuhu aysan jacayl ku helin jidhkooda oo ay ku deeqaan ee taas badalkeeda ay hoos u dhigto”.
DAAWO MUUQAALKAN YABAKA
“Calaaqaadka galmaduna uu sababi karo in gabadhu ay ku waydo jacaylkii loo qabay”. Qolada daabacday buugan oo la hadashay warbaahinta dawladda ee Global Times ayaa sheegay in erayada la isticmaalay aysan aflagaado ahayn.
Title: shekoyinka galmada ka hadla oo gabdhaha ku biya baxaan
Posted by Unknown, Published at 12:30 AM and have 0 comments